Mpivarotra telephone ao @Supreme
Nividy téléphone alcatel oneTouch tao amina boutique iray ao am supreme ny tenako t@début mai lasa iny!Tsy tononoko eto ny anaran ilay boutique fa tena une semaine taty aorina dia nahitana olana ilay téléphone! Tonga dia nentina tao dia nosoloiny téléphone efa kikakika ny coque!Ts nanaiky aho fa soloy hoy aho!Nosoloina dia nandramana teo, mandeha fa ny appareil photo no flou ny sary alaina aminy!Dia niverina andro hafa indray satria ny fotoana mandeha moa ilay izy ts itan izy ireo izay atao!Dia nalaina ary ity izy ka nanome toky ilay mpivarotra fa hoe aza matahotra ianao ramose fa mandeha io a!Tonga tany atrano dia herinandro indray dia manty tsy velona intsony!Nentina tany indray dia efa tezitra mafy aho ka lasa hatramin ny natafavoaka teny hoe:"ra ny tiko dia mba ny lehibenareo no miresaka amiko..."
Nanomboka teo dia ts itan izy ireo izay atao!Ilay telephone nalainy tany dia hoe jerena aloa!Ny tenako efa vonona ny tsy hiala teo ra ts vitany ilay izy, soloiny na mahita an ilay lehibendrizareo.Tampoka teo, hoy ilay mpivarotra hoe:"aleo averiko ny volanareo fa tsy tiko le vavan'i ramose!!!"Gaga sady taitra aho hoe vavako ahoana?!
Dia naverina ary ity vola (300 000 ar teo eo ilay izy).
Ny tiko ambara eto dia ny hoe:misy tetika ratsy ataonireo mpivarotra (bizina) dia tsy fantatr ilay tompony akory!Sady sur aho hoe mbola amidin ry zalahy izao ilay phone!!!
Re: Mpivarotra telephone ao @Supreme
Date: 21 juin 2017 - 13:11
Manakasitsara: Ka efa voa @ ilay bizina ny saina dia tsy mety intsony eh! Tsy mieritreritra afa-tsy vola isan'andro.Hany ka miafara @ fisolokiana.
Ireo mpivarotra @ sinoa sy karana koa dia miaina @ hafetsifetsena toy izany foana: Ampitomboany ny tokony ho vidin'ny entana lazainy ka raha tsy mahafantatra ianao mpividy dia voany, ny an'ny mpampiasa tsy banga, izy vendeur/vendeuse mahazo ambony apanga isaky ny mihetsika.
Misy aza moa dia sahy mangataka "régime" tsotra izao.
Izay no mahatonga an-dry zareo miaritra ny karama KELY omena azy.
Date: 22 juin 2017 - 11:32
maaraka:tena izany mihintsy angamba!Fa ny tena loza anie dia isika samy gasy ihany no mifamono eto e!Ra ohatra ilay phone ka hoe mandeha dia tsy misy olona, sady ry zareo ary zany mba mitsakaraka fa le toe tsaina mints hoe efa fantatra izany ilay izy fa ts norme de mbola mi insiste ihany ry zareo mivarotra anle izy!Izao aloha tsy nanaiky e!Hafatra amle izy!Tsy mividy raha tsy eny amle revendeur ireny ihany e!
Par: Rehefa gasy
Date: 22 juin 2017 - 13:25
Tsy eny @ Supreme center ihany fa ny ankamaroan'ny gasy miasa @ sinoa dia tia kely ohatr'io daholo.
Ireo mpanao varavarana na zavatra hafa @ alu diatoy izany koa. Tratra izay indray mandeha hoe zavatra ratsy no no-livrer-ny, dia nangataka izahay hoe ho soloina.
Isaky ny manontany ianao dia lazainy fa miandry livraison. Afaka 1 volana mahery, nalehanay tany @ le sinoa. Eo no ho eo ihany dia nomenomenoman'ilay sinoa ilay mpiasa gasy.
HAy izy ity tsy ampahafantariny ilay sinoa fa tiany hanaovana afera fotsiny...
Date: 22 juin 2017 - 13:38
ny hitako indray dia izao, izaho tsy nividy fa nijery "vitrine", "telephone" "bizne" an-dry zalahy no atolony (na "proposer"-ny ) ny olona hividy, avoakany avy any am-paosiny any, dia dokafany eo
ka mila mitandrina fa izany efa fanaony